Ezona ncwadi zilungileyo zaseSpain kwimbali | Uncwadi lwangoku
Ezona ncwadi zilungileyo zaseSpain kwimbali
Uncwadi lwethu, oluphela kwiiPyrenees kwaye ngamanye amaxesha luye luye kwi-Canary Islands, ethi yona ivele eValencia iye e-Extremadura idlula eMancha ezele ziintsomi namabali, iseka ilizwe leeleta ezingayekiyo ukuzihlaziya. Ukuvela. Ezi Iincwadi ezilungileyo zespanish kwimbali bayakuqinisekisa.
1 Ezona ncwadi zilungileyo zaseSpain kwimbali
1.1 La Celestina, nguFernando de Rojas
1.2 I-Lazarillo de Tormes
1.3 UDon Quixote de la Mancha, nguMiguel de Cervantes
1.4 UFortunata noJacinta, nguBenito Pérez Galdós
1.5 Iingcongolo nodongwe, nguVicente Blasco Ibáñez
1.6 Usapho lukaPascual Duarte, nguCamilo José Cela
1.7 UNada, nguCarmen Laforet
1.8 Iiyure ezintlanu kunye noMario, nguMiguel Delibes
1.9 Intliziyo imhlophe kangako, nguJavier Marías
1.10 Amajoni aseSalamina, nguJavier Cercas
La Celestina, nguFernando de Rojas
Nangona iinguqulelo zokuqala zomsebenzi zafika ngexesha leeKumkani zamaKatolika, kwakungayi kuba kwinkulungwane ye-XNUMX xa omnye weyona misebenzi ibaluleke kakhulu kuncwadi lwethu ingafezekisa impumelelo eyayiza kuyenza ibe luhlobo ngokwalo, uncwadi kunye nenkcubeko. Ithathwe njenge «mzantsiwentsi«, La Celestina ubalisa ibali lamadoda amabini aselula, uCalisto noMelibea, abadityaniswe ngamaqhinga onongogo owaziwa njengo «Celestina». Umsebenzi wawungavumelekanga ngexesha lokuNcinwa, kwaye waphinda wavela kamva.
I-Lazarillo de Tormes
Nangona owona mhla upapashiweyo ungaziwa, iinguqulelo ezindala zenye yazo imisebenzi emikhulu yoncwadi lwaseSpain umhla ukusuka ku-1554. Ixesha apho umlinganiswa ophambili, I-Lazarillo de Tormes, unyanzelekile ukuba aphile ukusuka ebuntwaneni obuhlungu kude kube ngumtshato wakhe, edlula ngokudibana nabalinganiswa njengendoda eyimfama eyaziwayo eyamkhohlisa ngexesha lembali. Kuthathelwa ingqalelo njenge-ode yokuhlazisa ixesha kunye nohanahaniso kuluntu olonakaliswe ngabefundisi, u-Lazarillo de Tormes kwavalwa kwada kwayinkulungwane ye-XNUMX ngeNkundla yokuNcina amakholwa apho wazama khona umbhali ongaziwayo ngubani obhale umdlalo.
UDon Quixote de la Mancha, nguMiguel de Cervantes
Ipapashwe ekuqaleni kuka-1605, uDon Quixote uya kutshintsha ngonaphakade kungekuphela nje kwicala uncwadi eSpain, kodwa nakwihlabathi liphela. Ibali lendoda enesidima, efunda ngokugqithileyo iinoveli ze-chivalric ezikhokelele ekudidekeni kweefestile zomoya zaseLa Mancha kunye nezigebenga zazingaphezulu kwinoveli ye-burlesque, indibaniselwano yesalathiso sexesha kunye ne-polyphonic, eneembono ezahlukeneyo zabalinganiswa abaphambili Indlela ebalisa kunye nedilesi yokwenyani. Ngaphandle kwamathandabuzo, owona msebenzi weengoma zethu.
Ngaba awufundanga «ICixixote"?
UFortunata noJacinta, nguBenito Pérez Galdós
Iqwalaselwe ngabaninzi njenge owona msebenzi ungcono waseGaldós, mhlawumbi ikwaphenjelelwa ngu UMlawuli, epapashwe kungekudala ngaphambi komhlobo wakhe uLeopoldo Alas Clarín, UFortunata noJacinta uthetha ngabafazi ababini. Inye, iFortunata, inenkohliso kwaye iyidolophana encinci, ngelixa uJacinta ebuthathaka kwaye evela kusapho olulungileyo, iipali ezimbini ezichaseneyo ezigqibela ngokudibana ngokutshatyalaliswa. Umsebenzi wapapashwa ngo-1887 emva koko unyaka nesiqingatha sendalo nguGaldós, otyale eyona mizamo mikhulu yomsebenzi wakhe kulo msebenzi.
Ngaba ungathanda ukufunda UFortunata noJacinta?
Ngo-1902, iSpain yaphoxeka. Silahlekelwe yiCuba, inqaba yokugqibela yobukhosi obukhulu obathi basibangela ukuba sijonge kwilizwe lethu, elinye lamaxabiso atshintshiweyo kunye nelifa elingafunwa mntu. Inxalenye yesiseko seli xesha ichaza Iingcongolo nodaka, Umsebenzi owenziwe nguBlasco Ibáñez IAlbufera yaseValencia efaka ibali lemvukelo phakathi komntu ophambili, iTonet, eya kuyisemkhulu notata wakhe, amafama amabini athobekileyo, kunye nebali lakhe lothando noNeleta. Icandelo eliphambili le- yendalo, I-Cañas y Barro yinoveli enedayi yemveli eqinileyo njengoko ikhoboka.
Usapho lukaPascual Duarte, nguCamilo José Cela
La Uncwadi lweSpanish Kusivumele ukuba sisondele kwinyani yexesha ngalinye kwaye abanye babephethe ukuhlanganisa zonke ezi ndawo zikwimisebenzi efanayo. Le yimeko ye inoveli ebalaseleyo kaCamilo José Cela, epapashwe ngo-1942 kunye nomfanekiso wendoda evela emaphandleni e-Extremadura ukususela ngo-1882 ukuya ku-1937, ixesha leSpanish elinenkxalabo yezopolitiko. Umtya wetempile, wona oquka imibala ye ubunyani bendalo, ubunyani kunye nenoveli yezentlalo Echaza ixesha eliqhushumbe kwiMfazwe yamakhaya yeziphumo ezibi eSpain.
Lee Usapho lukaPascual Duarte.
UNada, nguCarmen Laforet
UAndrea ngumfazi oselula oya e-Barcelona ukuya kufunda ifilosofi kunye noNcwadi. Isiqendu esitsha apho axoxa khona phakathi kweengxabano zangaphakathi zosapho kunye nobudlelwane obuvela kumava akhe eyunivesithi. Ilizwi lexesha njengoko lalinjalo ixesha lasemva kwemfazwe, Nada yaba ophumelele uhlelo lokuqala lweBhaso likaNadal Ukuvula iingcango ezintsha zoncwadi kwaye, ngakumbi, kubabhali abathile uLaforet abe ngumzekelo wokulandela.
Iiyure ezintlanu kunye noMario, nguMiguel Delibes
Emva kokuphulukana nendoda yakhe, umfazi uyawukhathalela umzimba wakhe ebusuku. Kwitafile esecaleni kwebhedi kukho izicatshulwa ezivela ebhayibhileni zikrwelwe ngumyeni wakhe, into ekhokelela ekubeni umlinganiswa ophambili agungqise umntu ongalawulekiyo avakalise iminqweno kunye nobunzima bobomi bonke. Ithuba elisebenza ukushwankathela indima yabasetyhini baseSpain kwinkulungwane yama-XNUMX ngendlela ekhethekileyo, ekrelekrele ... ke iiDelibes.
Iiyure ezintlanu noMario Yinto engaqhelekanga.
Intliziyo imhlophe kangako, nguJavier Marías
«Bendingafuni kwazi, kodwa ndiye ndafunda ukuba enye yamantombazana, xa yayingengomntwana kwaye kungekude ibuyile kuhambo lwayo lomtshato, yangena kwigumbi lokuhlambela, yema phambi kwesipili, yavula iblawuzi yayo, uye wakhulula ibra yakhe wafikelela entliziyweni yakhe ngencam yompu ... »
Esi siqalo sentsomi ngumpu wokuqala wenye ye imisebenzi emihle yoncwadi lwethu kunye nempumelelo yokuthengisa emva kokupapashwa kwayo ngo-1992. Intliziyo imhlophe kangako, epapashwe kutshanje ngo-2017 kumsitho wokugqiba iminyaka engama-25, uxela ngomntu osandul 'ukutshata owayesandul' ukutshata eHavana ephethe into engaphaya komtshato wakhe.
Amajoni aseSalamina, nguJavier Cercas
Ichazwe ngabaninzi njengomzekelo iqela (Inyaniso + yintsomi), Amajoni aseSalamis, epapashwe ngo-2001, yaphuma Ukuthanda kukaCercas ngejoni eligcine uRafael Sánchez Mazas, umbhali weFalange yaseSpain kunye nomhlobo kaFranco, owasinda kuqhushumbe e-Barcelona ngexesha langokuhlwa kwemfazwe yamakhaya yaseSpain. Indibaniselwano egqibeleleyo yefantasy kunye nenyani ethi, ngaphezulu kokuzama ukusondela kwimbambano enkulu yaseSpain yekhulu lama-XNUMX, ijolise kulonwabo "lokuphinda" ngexesha lokuphelelwa lithemba.
Zeziphi ezona ncwadi zibalaseleyo zaseSpain kwimbali yakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ezona ncwadi zilungileyo zaseSpain kwimbali
Ngaba ukufa asikuko okwenzakalisa uninzi luka-Inés Plana oyena mthengisi ubalaseleyo kunyaka?